सिंचाई - सबै रूखहरू | सबै रूखहरू
जीवनको लागि पानी आवश्यक छ। रूखहरूले यसलाई पातहरू, फूलहरू, हाँगाहरू र फलहरू उत्पादन गर्न, साथै तिनीहरूको जरा र काण्डहरू विकास गर्न प्रयोग गर्छन्। तैपनि, संसारमा सबै ठाउँमा समान रूपमा उपलब्ध छैन: उदाहरणका लागि, युरोपको उत्तरमा यो महादेशको दक्षिणमा भन्दा धेरै पटक वर्षा हुन्छ, उत्तर अफ्रिका वा पश्चिमी अष्ट्रेलियामा मात्र छोड्नुहोस्।
तसर्थ, रूखहरूले बाँच्नको लागि तिनीहरूको बासस्थानको अवस्थाहरूमा बाँच्नका लागि आफूले थाहा पाएको उत्तम अनुकूलन गर्नुपरेको छ।। र यसो गर्दा, धेरै प्रजातिहरू लोप भए तापनि, अरूहरू देखा परेका छन्, जुन हामी आज जान्दछौं।
अब जब हामी एउटा खोज्न जान्छौं, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले दिमागमा आफ्नो पानीको आवश्यकता के हो। पानी एक दुर्लभ स्रोत हो, त्यसैले, हामीले आफ्नो क्षमताको उत्तम रूपमा यसको फाइदा उठाउनु पर्छ, र यो गर्ने एउटा तरिका भनेको हाम्रो क्षेत्रको परिस्थितिमा समस्या बिना अनुकूलन गर्न सक्ने रूखहरू रोप्नु हो।
तर कहिलेकाहीँ तिनीहरूलाई पानी चाहिन्छ। ती अवस्थामा, कसरी र कहिले पानी हाल्नु पर्छ? कस्तो प्रकारको पानी प्रयोग गर्ने? हामी यी र अन्य प्रश्नहरू यहाँ, सिँचाइ खण्डमा समाधान गर्न जाँदैछौं।
रुखलाई कहिले र कसरी पानी दिने ?
रूखहरू बिरुवाहरू हुन् जसले सामान्यतया या त उनीहरूलाई चाहिने भन्दा धेरै पानी पाउँछन्, वा यसको विपरित कम…।